5-ta ugu Sareysa ee Dharka Iibka ah ee La Isticmaalay ee Nauru oo leh qiime warshadeed
Posted on Waxaa laga yaabaa 18, 2022 Waxaa laga yaabaa 18, 2022 by Fei (aasaasaha)
2 Shadi Trading
4 Hal qayb oo ka mid ah Kaz Trading Inc.
Maanta, waxaan ka doodi doonnaa 5-ta ugu sareysa alaab-qeybiyeyaasha dharka loo isticmaalo jumlada Nauru. Qaar ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha dharka ee Nauru ayaa adkaan karta in la go'aamiyo midka kugu habboon ganacsiga dharka loo isticmaalo. Maqaalkan, waxaan ku liis gareyn doonaa 5-ta shirkadood ee ugu sumcadda badan dalka si aad go'aan xog ogaal ah u gaarto. Maskaxda ku hay in qiimaha iyo tayada ay ku kala duwanaan karaan alaab-qeybiyaha ilaa alaab-qeybiyaha, markaa hubi inaad sameyso cilmi-baaris ka hor intaadan wax iibsan. Waad ku mahadsan tahay akhrinta!
Hissen Global waa shirkad dhar-gacan labaad ah oo jumlo leh oo leh nidaam ilaalin tayo adag leh. Shirkaddu waxay heshay dhammaan shahaadooyinka lagama maarmaanka ah, oo ay ku jiraan shatiyada warshadaha sida ISO9001, ISO45001, iwm.
Waxay caan ku yihiin haysashada nidaamka xakamaynta tayada adag. Waxay hirgeliyaan 5 jeer hubinta tayada inta lagu jiro habka wax soo saarka iyo ka hor xirxirida iyo rarista. Tallaabo kasta waxaa lagu maamulaa 100% buug.
Dharka ay shirkaddu isticmaashay ayaa lagu kaydiyaa meel ammaan ah oo qallalan, taasoo ka dhigaysa mid wanaagsan oo dharka la isticmaalay.
Hissen waxa uu leeyahay koox shaqaale khibrad iyo aqoon leh kuwaas oo diyaar u ah inay ka jawaabaan su'aalahaaga. La xidhiidh maanta si aad wax badan uga ogaato adeegyadooda ama aad u dalbato.
Hal qayb oo ka mid ah Kaz Trading Inc.
Entry waxa loo posted in Industry News iyo tagged hissen, 5-ta ugu Sareysa ee Dharka Iibka ah ee la isticmaalo gudaha Nauru.
Hal fikir5-ta ugu Sareysa ee Dharka Iibka ah ee la isticmaalo gudaha Nauru"
Waxaan ka helay waxaad sidoo kale ku jirtaan. Sida shaqada iyo warbixinta caqli badan! Sii wad shaqada wanaagsan nimanyahow waxaan idinku daray nimanyahow blogroll-kayga. Waxaan u maleynayaa inay hagaajin doonto qiimaha boggayga 🙂
June 22, 2022 at 2: am 47